Ukugezwa kwesihlobo – iAfrika
Ukugezwa kwesihlobo wumcimbi owenziwa ngabantu ababili abathandanayo bebe beyizihlobo. Lomcimbi uyenziwa kungakhathaliseki noma ngesikhathi labo ababili beqala ukuthandana babazi noma babengazi ukuthi bayizihlobo. Ngokosiko isihlobo sigezwa ngumuntu wesilisa ngoba phela wuyena oweshela intombi. Ngokwejwayelekile isihlobo siyaye sigezwe ngembuzi, kodwa uma ngabe isihlobo kungesikamama, noma isihlobo sikamama kababa; emcimbini walezo zihlobo kugezwa ngenkomo. Isihlobo sigezwa ngesikhathi kulotsholelwana noma ngesikhathi kuqala kukhishwa amahlawulo.
Imbuzi noma inkomo yokugeza isihlobo ibulawa ngalo usuku efike ngalo kodwa kuqale kushiswe impepho kuchazwe ukuthi kugezwa isihlobo phakathi kwentombazane yakwasibanibani nomkhwenyana wayo wakwasibanibani. Imbuzi yesihlobo ayibulawela endlini yokushisa impepho kodwa ibulawela phandle, kanjalo nenkomo yesihlobo ayibulawela esibayeni kodwa ibulawela ngaphandle kwesibaya bese kuchelwa ngenyongo nomswani egcekeni nasendlini yokhokho okuthiwa eyangasenhla. Uma sekwenziwe lokho sibe-ke sesigezekile isihlobo phakathi kwalabo ababili abathandanayo. Isizathu sokugezwa kwesihlobo kusuke kuwukwenzela ukuthi labo ababili abathandanayo bangatholi izingane eziyizidalwa noma ezinezinkinga.
Tags Ukugezwa kwesihlobo